I-Air Astana ivula iZiko lobuGcisa boPhapho kwisikhululo senqwelomoya sase-Astana
AKUKHO SANDI? Cofa kwisimboli sesandi esibomvu ngasezantsi ekhohlo kwesikrini sevidiyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Air Astana ivula iZiko lobuGcisa boPhapho kwisikhululo senqwelomoya sase-Astana
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ngamana 24, 2018
U-Air Astana, ophethe iflegi ophumelele amabhaso eKazakh, uphawule isikhumbuzo seminyaka elishumi elinesithandathu ngokuvulwa kweZiko lobuGcisa bezoPhapho elitsha e-Astana's Nursultan Nazarbayev kwisikhululo senqwelomoya namhlanje. IZiko lobuGcisa boMoya elitsha lenza ukuba iA Air Astana yenze zonke izinto zobunjineli beenqwelomoya kunye neenkonzo zokufikelela kwinqanaba lokugcina elinzima. Iprojekthi ixhaswe yiBhanki yaseYurophu yoKwakha ngokutsha kunye noPhuhliso ngexabiso le-US $ 19 yezigidi.
Amandla e-Aviation Technical Centre asebenza ngamandla, i-hangar eyodwa inika i-5,500 yeemitha zesikwere kwindawo yomgangatho kwaye inokwamkela uhlobo olubanzi njengeBoeing 787 okanye iBoeing 767 ecaleni kwenqwelomoya enye yeenqwelomoya njengentsapho yeAirbus A320neo kwangaxeshanye. Isakhiwo esiyiliweyo saseCanada sakhiwe kwindawo ephezulu kakhulu kwaye siyilelwe ukuba ihlale isebenza ngokupheleleyo nangaphantsi kwamaqondo obushushu asezantsi afunyenwe e-Astana ngeenyanga zobusika. Ukongeza kwi-hangar, iZiko lobuGcisa boKwakha libandakanya indawo yokugcina izinto kunye noluhlu olupheleleyo lweeworkshops zokulungisa kunye nokulungisa izixhobo zenqwelomoya. Isakhiwo esincedisayo sibonelela ngendawo ekhoyo kubuNjineli boMoya kunye neZiko ukwandisa uqeqesho lobunjineli kunye nolondolozo lwabasebenzi ukuya kwimigangatho yamanye amazwe.
"Nge-Astana, ikomkhulu lekamva laseKazakhstan, kunye neAir Astana, umphathi weflegi yesizwe, ngokulandelelana ukubhiyozela isikhumbuzo sama-20 kunye neshumi elinesithandathu ngonyaka ka-16, ukuvulwa kweZiko elitsha lezobuchwephesha kwezobuchwephesha kubonisa isizathu ekwabelwana ngaso sokubhiyozela," utshilo uPeter Foster, uMongameli kunye ne-CEO Zomoya Astana. "Ku-Astana, iziseko zophuhliso lwendawo eneenqwelo moya zinegalelo ekumeni kwesi sixeko njengendawo ehamba phambili yomoya kuMbindi weAsia, ngelixa iAir Astana, ibonisa elinye inyathelo elibalulekileyo ekwandiseni amandla okuphatha nokwandisa udumo lwayo kwilizwe lonke ngokugqwesa."
U-Air Astana ngumphathi weflegi yeRiphabhlikhi yaseKazakhstan, ese-Almaty, Kazakhstan. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo, zasekhaya nezamazwe aphesheya kwiindlela ezingama-64 ezivela kwiziko eliphambili, Isikhululo senqwelomoya saseAlmaty, nakwiziko laso lesibini, Isikhululo senqwelomoya sase-Astana.
U-Air Astana ubuyela kwiNzuzo
Umanyano wezothutho waseYurophu ufuna ubuncinci bokusebenza ...
IJamaica yoKhenketho iwonga ngevolontiya laseJapan ...
Abantu baseMelika balumkisa ngalo lonke uhambo oluya eRashiya
IFransi ibhengeza ukupasa kwe-COVID kwimivalo, kwiivenkile zokutyela ...
Kumbhobho, Kwindlu ephalaziweyo yehobe: Apho bahlala bangenamakhaya khona
Uqhushululu olunobundlongondlongo lwaphuka eParis ngenxa yesinyanzelo se-COVID ...
I-Intanethi yezinto ziya kuba nendima enkulu kwiPosti ...
Iqakamba laseNew Zealand ngokukhawuleza lurhoxisa ukhenketho lwasePakistan ...
I-UNICEF yokubonelela ngeManyano yase-Afrika nge-220 yezigidi zeedosi ...
Ukufunyanwa kwakhona kwamanani abakhweli kuyaqhubeka eFRAPORT
Ukhenketho lweHlabathi ludinga uncedo, kwaye iSaudi Arabia ...
Isikhululo senqwelomoya iMoscow Sheremetyevo sikhulisa isisombululo esitsha se ...
Abakhenkethi baseKorea bathande iGuam kwaye i-GVB yamkela iT'way ...
AmaTshayina azakuthatha uhambo kaloliwe oluzizigidi ezingama-750 ngexesha ...
I-COVID-19 yokutshixa eyandisiweyo ngokungagungqiyo kwi ...
Olona lungelelwano lukhulu kwimbali: I-United yongeza i-270 iBoeing kunye ...
Ukutshona kwelanga kweHawaii Mhle kodwa ayisiyiyo eyona ilungileyo?
Ubume obutsha bovavanyo lwe-COVID eLiverpool John ...